Fiantsenana, fivarotana fivarotana, fanaka fivarotana - Changhong
Changhong dia niorina tamin'ny 1992 izay miorina ao Shijiazhuang Hebei China, akaikin'i Beijing. Changhong dia manome serivisy fivarotana samihafa ho an'ny orinasam-pamantarana marika, Ho mpitondra hafatra amin'ny hatsarana sy mpamorona sehatry ny orinasa maitso no fahitanay. Ny fanajana, ny tsy fivadihana, ny andraikitra, ny fanavaozana, ny fampiharana ary ny fiaraha-miasa no soatoavinay indrindra. Ao amin'ny tsenan'i Shina, CH dia misahana manokana amin'ny serivisy fivarotana tokana amin'ny fivarotana, ao anatin'izany ny famolavolana, ny fanamboarana, ny fampiasa lozisialy, ny fananganana, aorian'ny serivisy sy ny serivisy fikojakojana.
Ho an'ny tsena any ivelany, dia mamolavola, manamboatra ary manondrana karazana fitaovam-pivarotana rehetra izahay.
Fandefasana indray mandeha
30 taona niainany
Vahaolana fivarotana tokana
Nanolotra ny serivisy tsirairay avy izahay tany Hebei, Gansu, Guangdong, Mongolia anatiny ary Hubei nanomboka tamin'ny taona 1999. Tamin'ny fahatongavan'ny 4G taona, China Mobile dia nanintona ny fisian'ny endrika taranaka vaovao, ary ny fitaovana enti-mifandray miaraka amin'ny haitao matanjaka dia mahatsapa fa nitarika ny fanavaozana. Ho an'ity fotsiny, dia nampiarahinay ny tontolo iainana, ny fitaovana, ny jiro ary ny fitaovana. Marihina fa ny propatsintsika dia mampita tsara kokoa ny hafatra sy ny endrik'i China Mobile.
House Trano NIO） Ny Ivotoerana 24 Nio ao Harbin Changhong dia manome serivisy fananganana magazay an'ny NIO House ao Harbin. Amin'ny maha-ivon'ny nio voalohany amin'ny faritany avaratra atsinanana, ny NIO House dia miorina amin'ny tanàna & ...
Tamin'ny 25 aprily, ny lanonana fanomezana an'i China International Space Design Fifaninanana Hebei Division sy Hebei Architectural Decoration Industry Association 2019-2020 Environmental Art Design Fifaninanana ...
Fihaonamben'ny teknolojia CCDF _ Ass ...
Ny komity mpikarakara ny valam-pandrosoana fampiroboroboana indostrialy voalohany sy ny Konferansa fanao isan-taona momba ny Fampiroboroboana ny Indostrian'ny Indostrialy dia natomboka ary nametraka ...
Hisokatra ny kintana faha-6C amin'ny S ...
140+ mpamatsy vahaolana amin'ny varotra avo lenta avy amin'ny sehatra dimy, ao anatin'izany ny fampitaovana fivarotana sy kojakoja fivarotana, famolavolana magazay, fivarotana varotra, teknolojia fivarotana marani-tsaina, lig ...
Tetikasa bebe kokoa